Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Southwest Airlines dia manambara ny filoha vaovao
Mike Van de Ven dia voatendry ho filohan'ny orinasa, manan-kery avy hatrany.
Gary Kelly, ny filoha lefitra sy ny CEO an'ny Southwest, dia nanambara tamin'ny anaran'ny Birao mpitantana ny Southwest Airlines fa ny Lehiben'ny tompon'andraikitra Mike Van de Ven, 59 taona, dia voatendry ho filohan'ny orinasa, nanomboka teo noho eo. Van de Ven dia handray andraikitra fanampiny amin'ny kaonty anatiny ao amin'ny orinasa, ny fitohizan'ny asa aman-draharaha, ny valiny vonjy maika ary ny fitantanana ny risika eo amin'ny orinasa.
Ny fanovana mpitarika dia nambara tao amin'ny Southwest Airlines.
Tom Nealon dia nanapa-kevitra ny hiala amin'ny asany amin'ny maha Filoham-pirenena azy eo noho eo.
Southwest Airlines Co. dia nanambara ny fanovana mpitarika ankehitriny.
Tom Nealon, 60 taona, dia nanapa-kevitra ny hiala amin'ny asany amin'ny maha-Filoham-pirenena azy eo noho eo, fa kosa hanohy hanompo amin'ny orinasa ho mpanolotsaina stratejika, mifantoka indrindra amin'ny drafitra fihenan'ny tontolo iainana sy ny fihenan'ny gazy karbonika. Nealon dia nitana andraikitra mpitarika nandritra ny fotoana niasany tamin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, anisan'izany ny tetikasan'ny filoha lefitra stratejika sy ny fanavaozana ny taona 2016 ka hatramin'ny 2017, ny talen'ny birao atsimo andrefana ny taona 2010 ka hatramin'ny 2015, ary teo amin'ny toeran'ny mpanolotsaina lefitra sady filoha lefitra misahana ny fampahalalam-baovao tamin'ny 2002. hatramin'ny 2006.
"Voninahitra ho ahy ny nanompo tany atsimo andrefana nandritra ny taona maro tamin'ny sehatra maro samihafa, ary indrindra indrindra fa izaho dia filohan'ny zotram-piaramanidina tsara indrindra amin'ny asa," hoy i Nealon. “Manantena ny hanohy hanompo sy hanome torohevitra any atsimo andrefana momba ny fandraisana andraikitra stratejika aho, ary ny tena zava-dehibe, momba ny drafitra maharitra maharitra ho an'ny tontolo iainana an'habakabaka.”
Gary Kelly, ny talen'ny Southwest ary tale jeneraly, nambara tamin'ny anaran'ny Southwest Airlines Ny filankevi-pitantanana izay notendrena ho filohan'ny orinasa, izay miasa avy hatrany ny Lehiben'ny tompon'andraikitra Mike Van de Ven, 59 taona. Van de Ven dia handray andraikitra fanampiny amin'ny kaonty anatiny ao amin'ny orinasa, ny fitohizan'ny asa aman-draharaha, ny valiny maika, ary ny fitantanana ny risika eo amin'ny orinasa.
“Te hisaotra an'i Tom aho noho ny fandraisany anjara tsy tambo isaina amin'ny antony izay Southwest Airlines nandritra ny taona maro - maro izy ireo ary tsy hita refesina. Faly aho fa hanohy hiasa ho mpanolotsaina stratejika i Tom. Faly be aho amin'i Mike rehefa mandray ny andraikiny vaovao amin'ny maha filoham-pirenena azy, ankoatry ny COO. Mike dia manan-talenta sy manam-pahefana ho an'ny mpitarika ary ho hitan'ny olona iray, ary nandray anjara mivantana tamin'ny fahombiazan'ny Southwest izy nandritra ny 28 taona nanompoany ny Orinasa sy ny Vahoakay.
"Ny ezaka tetezamita notarihin'ny filoha lefitra mpanatanteraka sy ny CEO jeneraly Bob Jordan dia mandeha tsara tokoa, ary rehefa mitohy izany, dia mandray fepetra izahay hanovana ireo anjara asa fanaovana tatitra ho fanomanana an'i Bob handray ny andraikitry ny CEO amin'ny 1 Febroary 2022," hoy izy Kelly.
Rehefa mandroso ny tetezamita, ny ekipan'ny Vola, Varotra, Ara-dalàna & Fitsipika, Operasiona ary Teknolojia izay nitory tamin'i Kelly na Nealon dia hitory any Jordania ankehitriny, ary mandaitra avy hatrany koa.
"Amin'ny anaran'ny filankevi-pitantanana, tiako ny misaotra an'i Tom noho ny efa ho dimy taona naha filoham-pirenena azy ary mihoatra ny 15 taona ny asany amin'ireo mpiasan'ny Southwest Airlines, ny mpanjifa, ny tompon-trano ary ny vondrom-piarahamonina iasantsika," hoy izy Tale jeneralin'ny Southwest Airlines William Cunningham. “Faly be izahay fa manana talen-tsoratry ny mpitarika toy izany any Southwest Airlines, ary faly amin'ny fanambarana an'i Mike Van de Ven ho mpandimby an'i Tom.”